Tenerife dia nosy iray ao amin'ny Nosy Kanaria (Espaina). Manana faritra iray ny 2,034.38 kilometatra toradroa sy ny mponina 891.111 mponina. Izy io no nosy be mponina indrindra ao Espaina, izany ihany koa ny nosy lehibe indrindra ao amin'ny vondronosy. Ny renivohitry ny nosy dia Santa Cruz de Tenerife, izay ihany koa ny renivohitry ny Nosy Kanaria.
Tenerife no Teide volkano amin'ny 3.718 metatra no tendrombohitra avo indrindra ao Espaina sy ny fahatelo lehibe indrindra eto an-tany volkano avy amin'ny faladiany teo amin'ny ranomasina tany. Teide National Park dia iraisam-pirenena UNESCO. Ny tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny nosy dia San Cristóbal de La Laguna, izay ihany koa ny iraisam-pirenena. Ny faritra Anaga dia Biosphere Reserve.